१९५० को विवादित सन्धी संशोधन गर्न बल्ल तयार भयो भारत, नेपाललार्इ मस्यौदा लेख्ने जिम्मा - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
१९५० को विवादित सन्धी संशोधन गर्न बल्ल तयार भयो भारत, नेपाललार्इ मस्यौदा लेख्ने जिम्मा
२९ पुस २०७४, शनिबार १०:२४ January 14, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडाैं, २९ पुस । नेपालमा लामाे समयदेखि विराेध हुँदै अाएकाे १९५०काे सन्धी परिमार्जन गरिने भएकाे छ । नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को छैटौँ बैठकले १९५०को सन्धी परिमार्जन गर्ने निस्कर्ष निकालेको हाे ।
भारतकाे नयाँ दिल्लीमा रहेकाे इपिजीकाे सचिवालयमा बिहीवार र शुक्रवार बसेको दुर्इ देशका अधिकारीहरुकाे संयुक्त बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे । उक्त बैठकमा दुई महिनापछि फेरि बस्ने सातौँ बैठकबाट संशोधित सन्धीको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले सन्धि परिमार्जन गर्नका लागि त्यस्ताे साझा प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मा समेत नेपाललार्इ दिएकाे छ । अब नेपालले कसरी कस्ताे मस्याैदा तयार गर्छ भन्ने धेरैले चासाे राखिरहेका छन् । इपीजीकाे अर्को बैठक फागुन १२ र १३ गते काठमाडौंमा बस्ने तय गरिएकाे छ ।
१९५० को नेपाल भारत सन्धी यथावत नराख्नेमा दुबै देशकाे सहमति भएपछि यस्ताे निर्णय गरिएकाे इपिजीका सदस्य डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । उनले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाना यही अवस्थामा राख्न नहुनेमा भारत पनि सहमत भएकाे बताए । त्यसकाे माेडालिटी कस्ताे हुने भन्नेमा मात्र टुङ्गाे लगाउन बाँकी भएकाे उनले बताए ।
यसपटककाे बैठकमा सन्धीको दफाबार छलफल भएको बताइएकाे छ । खासगरी सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पारबहन, सीमा व्यवस्थापन, दशगजाको व्यवस्थापन, विवादित भूमिका बिषयमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलपछि सन्धीको धारा २, ५, ६ र ७ संशोधन गर्ने तय भएको छ । तर भारतीयपक्षले अर्को बैठकमा थप राय दिएपछि यो बिषय टुंग्याउने सहमति भएको इपिजी सचिवालयका निर्देशक यादब खनालले जानकारी दिएका छन ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा। राजन भट्टराई र सचिवालयका सचिव यादब सहभागी थिए । त्यसैगरी भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी. लामा र बिसी उप्रेती बैठकमा सहभागी थिए ।
आयल निगममा टेन्डर प्रक्रिया नै भ्रष्टाचारको जरो
ओली-प्रचण्डले केन्द्रीय नेताहरुलाई गाउँपालिका इन्चार्ज बनाउने तयारी गरेपछि
विद्यार्थी दिवसमा अखिल क्रान्तिकारीले भन्यो: राष्ट्रघाती अरुण-३ सम्झौता खारेज गर
नयाँ बसपार्कमा नयाँ प्रहरी निरीक्षक : सेवा कम सास्ती बढी
मान्छे झुक्याउनलाई यहाँ मायावी अावरण छ